Kismaayo News » Masiibada Muqdisho murugada ay reebtay muxubo dhexdeena ah ma ku dhalan kartaa?
Masiibada Muqdisho murugada ay reebtay muxubo dhexdeena ah ma ku dhalan kartaa?
Kn: Waxa dhacay ma aha oo kaliya mid ka ilmaysiiyay shacab weynaha ku dhaqan Caasimadda dalka ee waa mid calool xumo iyo murugo ku beeray guud ahaan bulshada Soomaaliyeed marka laga reebo inta yar ee maanka guracan ee ama ka danbaysay falka waxashnimo ama la afkaar ah. Ma aha wax la soo koobi karo muuqaalada gadinaya quluubta qof kasta oo ay ku jirto dareen biniáadan iyo danqasho naxariiseed.
Ku dhawaad sadexda boqol ee dhimatay iyo boqolaalka dhaawaca ah markaad mid mid u dul istaagtid waxaa kaa dhamaanaysa oohinta, waxaa kaa buuxsamaysa caro aadan garanayn cidaad kula dhici lahayd, waxaa gibilkaaga madoobaynaya muruggo iyo calool xumo. Dadka nolosha ku gubtay ee ay adagtahay in la aqoonsado, dhalinta jaamacadaha ka qalin jabiyay ee isu diyaarinayay inay mustaqbal wanaagsan samaystaan ee la ajalay, qurbajoogga dib u guryo noqday ee ayagoon wali ehelkooda arag aakhiro loo diray, caruurta iyo waalid kooda la kala qariyay ee siday irsaaqad raadin uga kaleheen aan dib danbe isu arkaynin iyo kuwa hilbahoodu inta qurubyo yaryar u googoáy isku darsamay ee uusan jirin aalad lagu kala sooco si eheladay ka tageen nafta ugu qanciyaan inay duugtaan.
Muuqaalada waxaa kamid ah labadan wiil ee yaryar ee kaartoonka ku wada hilbo ka soo haray hooyadood oo jidka dhiniciisa miis ay alaabo yaryar ku gado ku haysatay laakiin nasiib xumo uu qaruxu ku haleelay. Wali lama oga khasaaraha dhabta ah maadaama saamaynta qaruxu uu aad darnaa, dadka ku waxyeeloobayna loo kala qaaday ruggo caafimad oo magaalada ku baahsan. Waxaa tirada sii kordhinaya dad dhaawac halis ah qabay oo dhintay iyo kuwo maalin kadib laga soo qufay dhismayaal ku dumay.
Marka laga tago caloolyowga iyo murugada masiibada Xamar ka dhacday, suáashu waxay tahay, suurogalnimada in mashaqadani ay bulshada Soomaaliyeed dhaxalsiiso muxibo iyo kalgacal, is cafis iyo wax wada-qabsi iyo inay gacmaha isu qabsadaan sidii ay dalkooda nabad uga dhigi lahaayee. Dhibaatadani waa inay qurbajoogta dhaxalsiisaa inay si wada jir ah u garab istaagaan walaalahooda ku naf iyo hanti waayay masiibada Xamar, kuwa dalka joogaana waa inay u istaagaan ka shaqaynta nabadda iyo dabargo´ynta nabad diidka.
Ugu danbayn KismaayoNews waxay shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyaynaysaa masiibada qaran ee Muqdisho ka dhacday, waxayna Eebe uga baryaysaa inuu siiyo nabad waarto oo soo degdegta iyo barwaaqo aduun oon lagu fidnoobin.